Ngokushesha ehlobo, okwase kuyisikhathi eside ulindelwe samaholidi. Kodwa-ke futhi inkathi yonyaka olithandayo amasela efulethini, oqala esiqongweni umsebenzi. Ngakho-ke, kithi ebaluleke kakhulu ukulungiswa efulethini / indlu / cottage ngoba singekho isikhathi eside. Kunezindlela eziningana imithetho ezingakusiza ukwenza ngcono ukuphepha efulethini.
Nazi imithetho eyisisekelo ukuvikela indlu kusuka amasela:
Uma uhlala wedwa noma ikhefu umndeni wonke, ungabhali ngakho in the ukuxhumana nomphakathi, njengasezulwini ukuxhumana nomphakathi amasela ukuthola iningi izisulu zabo ezingaba khona. Uma efulethini namanje abanye kwesokunxele, bese leli phuzu akubahluphi wena, njengoba they hlangabeza lonke endlini ukuphepha efulethini.
Uma uhlala phansi noma phansi, noma ewindini lakho likwazi ukufinyelela emthini noma kwegceke kombhede ke ngawe kuba amawindi zokuphepha ezifanele. Manje iningi amawindi plastic kukhona nokufakwa umgqekezi-ubufakazi bokuthi ngeke sivumele ukuthola endlini yakho efasiteleni. Uma une amafasitela evamile, khona-ke ungase ucabangele ukukhetha ukufakwa kwi grilles iwindi noma ekhethekile roller yokushutha, kodwa zombili lezi izindlela akuzona tebuciko kakhulu. Ngakho-ke, uma ngamaholide kusadingeka amaviki ambalwa futhi kukhona ethile esiqiwini (isibusiso, Manje ukufakwa amawindi plastic akudingi imali eshisiwe kakhulu, njengoba kwakunjalo eminyakeni engu-3-5 edlule), kungenzeka ukuba esikhundleni amawindi yakho endala nge entsha, ngaphambilini kunoma iyiphi ifasitela inkonzo inkampani "amafasitela turnkey". Kodwa qinisekisa ukuthi amafasitela anemisila nokufakwa anti-ukugqekeza, njengoba leli phuzu kubalulekile ngawe njalo.
Ingafakwa efulethini idivayisi ekhethekile kulingisa ukuvula futhi off ukukhanya in the flat noma ukufaka inzwa ukuthi yasondela flat ngeke belingisa emagxolweni esihlahla inja, okuyinto iyayithusa off ngisho nesela.
Ungabeka efulethini siqaphe. Ukuze wenze lokhu, ungaxhumana inhlangano yezokuphepha ngokukhethekile ukuvikelwa kwezakhiwo ngokumelene ukweba baphule-ins. Kubalulekile ukuba banake idumela inhlangano lapho uya ziyasebenza.
Kufanele sixwayise umakhelwane ezethembekayo bheka emva efulethini ngesikhathi uhambo lwakho. Ngezinye izikhathi kuba omakhelwane wophula efulethini ekubeni inkunzi, ushayele amaphoyisa ngendlela esifike ngesikhathi.
Nazi nje imithetho eyisisekelo eyokusiza ukuvikela umuzi wakho kusuka ukugqekeza. Have iholidi enhle!
Wushu - kuyini? Ziyini izitayela zeWushu? Ingabe i-gym iyasiza ingane?
Ukhetho lwephalamende eRussia: izici futhi inqubo